Ndị uweojii ‘Federal Capital Territory Police Command’ anwudela mmadụ isii a na-enyo enyo na ha bu ndị ohi egbe ezu ohi ‘otu’ ohere n’akụkụ okporoụzọ Zuba na Lugbe nke Abuja.
E gosipụtara nke a na nkwupụta nke ASP Yusuf Mariam, onye uweojii na-ahụ maka mmekọrịta ndị mmadụ.
“N’otu aka ahụ, ndị uwe ojii si na Lugbe Division nwụchiri otu Emmanuel Joseph, 26 afọ, Thankgod Abam, 26 afọ, Gabriel Joshua, 27 afọ, na Ekene Nwatu, 31 afọ, ndị niile bụ ụmụ nwoke, maka ohi. Ndị omekome ahụ kwetara na ha na-atụ egwu Lugbe axis ma napụ ndị aka ha dị ọcha ihe ha nwere. Ngosipụta
Kemgbe ịgba alụkwaghịm ya na Alex Rodriguez, Jennifer Lopez na ex-Ben Affleck "na-anọkọ ọnụ." Nwere ike 2, 2021